प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले लोकतन्त्रको आवरणमा पक्षपाती र सामान्तवादी आचरण मौलाएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सुदर्शन अर्याल ‘सितल’द्वारा लिखित पुस्तक ‘लोकतान्त्रिक सामन्तवाद’को विमोचन कार्यक्रममा डा.केसीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
सहिदहरुको सपना र बलिदानअनुरुपको सत्ता सञ्चालन नभएको डा. केसीको आरोप छ । उनले भने, “सहिदहरुले किन रगत बगाए ? किन आफ्नो जीवन बलिदान दिए ? आज सहिदहरुको सपना अनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन भैरहेको छ ? लोकतन्त्रमा योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता हुन्छ, खै हाम्रो देशमा यसको स्थान कहाँ छ ?”
प्रक्रियामात्रै लोकतन्त्र भएर देश र जनताले सुख नपाउने उनले बताए । उनले भने, “पक्षपात, भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, यस्ता विषयहरुले स्थान पाउने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?”
कार्यक्रममा लेखक ‘सितल’ले उच्चारण गर्दा यस पुस्तकको नाम अप्रिय लागेपनि मुलुकको आन्तरिक सत्यता लोकतान्त्रिक सामन्तवाद नै भएको दाबी गरे । उनले भने, “नेपालीहरुले निन्दनीय र बिचरा जीवन जिउनु परिरहेको छ । बक्र रुपमा लोकतन्त्र, कागजमा लोकतन्त्र भएपनि जनताको जनजिविका, जनताका दुःख, अभाव र गरिवीहरुमा लोकतन्त्र छैन । भित्रि रुपमा लोकतान्त्रिक सामन्तवाद मौलायो ।”